အိုလံပစ်သမားဖြစ်လာ | ပြီးပြည့်စုံသောဆင်းသက်လာတောင်တက်စနစ်များ
ငါမမှတ်မိခင်အိုလံပစ်အားကစားပြိုင်ပွဲမှာအရည်အချင်းပြည့်မီချင်တယ်၊ မနက်မှာနိုးလာတာ၊ ငါ့မိသားစုနဲ့အတူတစ်ရက်ပြီးတစ်ရက်အိုလံပစ်ကိုကြည့်ရတာမှတ်မိသေးတယ်။ ကျွန်ုပ်သည်အားကစားလောကတွင်ကြီးပြင်းလာပြီးအသက် ၁၀ နှစ်တွင်တောင်တက်ခြင်းကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ အားကစား၊ ရပ်ရွာနှင့်အတူပါ ၀ င်သည့်အရာအားလုံးကိုကျွန်ုပ်ချက်ချင်းသဘောကျခဲ့သည်။ ငါစလုပ်တုန်းကအဲ့တာကိုသိပ်မကြိုက်ဘူး၊ ငါရထားလမ်းများအတွက်ငါခုန်နိုင်ကြောင်းလေ့လာသင်ယူသည်အထိငါ့အတောင်ကိုတွေ့နှင့်ငါ့အရာတို့ကိုတကယ်ချွတ်ခဲ့သည်။
ငါအိုလံပစ်၏ရည်မှန်းချက်မပါဘဲတောင်တက်အတွက်ငါ့အအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း၏အများစုဖြတ်သန်းသွားသည်ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, သူတို့ကအစီအစဉ်၏အစိတ်အပိုင်းမရှိကြပေ။ ကျွန်တော့်အမှားတက်တာကအိုလံပစ်မှာမဟုတ်ဘူး။ ၁၀ နှစ်အရွယ်နဲ့ငါချစ်ခဲ့တဲ့အားကစားပဲ။ ငါတောင်တက်ခြင်း၊ ပြိုင်ဆိုင်ခြင်း၊ တောင်တက်ခြင်းမခံရမီ ၁၉ နှစ်ကြာခဲ့ပြီးနောက်နောက်ဆုံးတွင် ၂၀၂၀ အိုလံပစ်အစီအစဉ်တွင်ထည့်သွင်းခဲ့သည်။ 10 ခုနှစ်တွင်ငါ၏တိုက်ရိုက်စီးစောင့်ကြည့်ခဲ့သည် IOC အလုပ်အမှုဆောင်ဘုတ်အဖွဲ့အစည်းအဝေး Salt Lake City ပြပွဲ၏ထောင့်မှ။ ၂၀၂၀ ခုနှစ်အစီအစဉ်တွင်အပြည့်အဝပါဝင်နိုင်သည့်အားကစားအဖြစ်ပါဝင်ရန်အားကစား ၅ ခု (ဘေ့စ်ဘော / ဆော့ဖ်ဝဲ၊ အားကစားတောင်တက်ခြင်း၊ ကရာတေး၊ ဖမ်းမိတာကသူတို့ဟာဒီအိုလံပစ်အားသာအာမခံချက်ရှိပေမယ့်နောက်ဆက်တွဲအားကစားပွဲတွေမှာပါ ၀ င်နိုင်မယ် အဆိုပါမဲတညီတညွတ်တည်းရှိ၏ တက်တက်အိုလံပစ်သွားခဲ့သည်! အဲ့ဒီအခိုက်အတန့်မှာငါ့မျက်လုံးတွေမျက်ရည်တွေစီးကျလာခဲ့တယ်။ အဲဒါဟာငါ့ရဲ့ပန်းတိုင်အသစ်ပဲ။
၂၀၁၇ ခုနှစ်မှာ "quad" လို့လူသိများတာကိုလေးနှစ်အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ ငါ့ကိုနွေရာသီအားကစားပြိုင်ပွဲတွေအကြားမှာသံသရာလည်ခဲ့တယ်။ အိုလံပစ်အပြီးတစ်နှစ်သည်“ အနားယူ” ရသောနှစ်ဖြစ်သည်။ ဒုတိယတစ်နှစ်မှာအပြောင်းအလဲတစ်ခုဖြစ်ပြီးပိုမိုအားကောင်းသည့်နှစ်ဖြစ်လာသည်။ တတိယနှစ်သည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုအောင်မြင်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်ပြီးစတုတ္ထနှစ်သည်အိုလံပစ်နှစ်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်သင့်နိုင်ငံကိုဂုဏ်ယူစေပါ။ ငါ၏အသံသရာတစ်နှစ်တိုးအတွက်အမြဲဖြစ်သကဲ့သို့ငါလေးနှစ်စက်ဝန်းမသိခဲ့ဘူး။ ငါကတစ်နှစ်ပြီးနောက်ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုအဘို့ပြုမိခဲ့သည်။
ကျွန်တော့်လေ့ကျင့်ရေးသံသရာသည်ယခုနှစ်အစတွင်အစွမ်းခွန်အားကိုအာရုံစူးစိုက်ခဲ့ပြီး Bouldering ရာသီသို့ ဦး တည်ခဲ့သည်။ တစ်နှစ်တာကာလတစ်လျှောက်တွင်၎င်းသည်ခဲရာသီသို့ ဦး တည်သောခံနိုင်ရည်ကိုတည်ဆောက်ရန်အချိန်ကောင်းဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာ့ဖလားချန်ပီယံနှစ်နှစ်တစ်ကြိမ်ကွဲပြားခြားနားအချိန်များတွင်ခဲ့ကြသည်။ မြန်နှုန်းကိုကျွန်တော်မကျင့်ခဲ့ဘူး၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီကမ္ဘာ့ဖလားတွေဟာအရမ်းကိုကွဲသွားတယ်။ ၂၀၁၇ နှင့် ၂၀၁၈ တို့ကိုအနှစ်ချုပ်ရန်သူတို့သည်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောနှစ်များဖြစ်သည်။ ငါ 2017 အတွက်အများစုအတွက်ဒဏ်ရာရခဲ့သည်, သောစိတ်ကိုခဲယဉ်းခဲ့ပေမယ့်ငါ့ကိုယ်ကိုငြိမ်ဝပ်စွာနေပေး၏။ ငါသည်ဤငါ၏နောက်ဆုံးစမ်းသပ်နှစ်ကသိ။ 2018 စတင်ခဲ့သည်။ ဒါဟာအကောင်းတစ်နှစ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါအများကြီးလေ့လာသင်ယူပြီးအဲဒီနှစ်အကုန်ပိုင်းမှာလေးလေးနက်နက်မြန်နှုန်းသင်တန်းကိုစတင်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်ဟာကျွန်တော့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းအတွက်အရေးကြီးဆုံးနှစ်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်သိခဲ့တယ်။
2019 ခုနှစ်တွင်အိုလံပစ်အစက်အပြောက်၏ 70% ကိုရွေးချယ်မည်ဖြစ်ကြောင်း, တိုက်ကြီးသာထွက်ခွာ ခွဲတမ်း ပြီးခဲ့သည့် 30% သည်။ ရွေးချယ်ရေးပြိုင်ပွဲကြီးနှစ်ခုရှိခဲ့သည် 2019 Hachioji ကမ္ဘာ့ဖလားချန်ပီယံ, ပြီးနောက် ပြင်သစ်နိုင်ငံ Toulouse ရှိအိုလံပစ်ခြေစစ်ပွဲ။ အားကစားသမားခုနစ်ယောက်ကိုကမ္ဘာ့ချန်ပီယံဆုနှင့် Toulouse မှ ၆ ဦး ကိုကမ္ဘာ့ပထမ ဦး ဆုံးတောင်တက်သမားများအဖြစ်ရွေးချယ်မည်ဖြစ်သည်။ ဒီနှစ်အတွက်ကျွန်တော့်ရည်မှန်းချက်ကအဲဒီအဖြစ်အပျက်နှစ်ခုထဲကတစ်ခုမှာအရည်အချင်းပြည့်မီဖို့ဖြစ်တယ်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိတောင်တက်သမားများကိုကြည့်လိုက်သောအခါနှင့်ပေါင်းစပ်ပုံစံကကျွန်ုပ်သည်ပြေးနေသည်ကိုသိသည်။ ငါပေါင်းစပ်ဖြစ်ရပ်များ၏ခိုင်မာသောသမိုင်းရှိသည်, ငါ Bouldering နှင့် ဦး ဆောင်ကမ္ဘာ့ဖလားနှစ် ဦး စလုံးအနိုင်ရခဲ့အနည်းငယ်အားကစားသမားတစ် ဦး ဖြစ်၏, ငါကောင်းသောယှဉ်ပြိုင်မှုစွမ်းရည်ရှိသည်။ ငါဟာကမ္ဘာ့ချန်ပီယံလိဂ်အတွက်အရည်အချင်းပြည့်မီပြီးသားဖြစ်ပေမယ့်ဒီပြိုင်ပွဲမှာလိုအပ်ရင်အနည်းဆုံးကမ္ဘာ့ဖလား ၆ ကြိမ် (စည်းကမ်းတစ်ခုစီရဲ့ ၂) ကိုတက်ဖို့လိုတယ်။ ဂိုးရအောင်လုပ်တဲ့အတွက် Toulouse အတွက်အကောင်းဆုံးဂိုးရဖို့ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံမတိုင်ခင်ကမ္ဘာ့ဖလားကိုသွားတက်ဖို့စီစဉ်ခဲ့တယ်။ ငါသည်လည်းထိုပြိုင်ပွဲများတွင်ပါဝင်လေ့ရှိပြီးလမ်းပေါ်တွင်ရှိနေခြင်းကိုနှစ်သက်ခဲ့သည်။ လမ်းပေါ်မှာရှိတုန်းကအရာတွေကရိုးရှင်းပါတယ်။ ငါထ, အစားအစာလုပ်, လေ့ကျင့်, ဆန့်, ပြေး, အစာစားခြင်းနှင့်အိပ်။ အာရုံပျံ့လွင့်စရာမရှိ၊ သွေးဆောင်မှုလည်းနည်းသည်။
ငါ၏အ Bouldering ရာသီ 2019 သာမန်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါ semifinals ၏စုံတွဲတစ်တွဲအတွက်သာခဲ့ပေမယ့်ငါကောင်းကောင်းဖြေရှင်းရေးပြproblemနာဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါလိုချင်သောရလဒ်များကိုမရရှိခဲ့ပါ၊ သို့သော်ပြိုင်ဆိုင်မှုတိုင်းနှင့်အတူကျွန်ုပ်၏အပြင်းအထန်ကြိုးစားမှုကိုတွေ့ခဲ့ရပုံရသည်။ ယခုနှစ်၏နောက်ဆုံးဖြစ်ရပ်သည် Vail အတွက် Bouldering ကမ္ဘာ့ဖလားငါဗိုလ်လုပွဲလုပ်။6ပြီးဆုံးဘယ်မှာ။ ငါ၏အစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဂိမ်းခဲရာသီသို့ရွေ့လျားဘို့ဤသည်ကြီးပဲ! ငါသည်လည်းမယုံနိုင်လောက်အောင်အရေးကြီးသည့်ဒဏ်ရာကင်းစင်သည်။
ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံမတိုင်မီ Lead World Cup သုံးခုရှိခဲ့ပြီးဗန်ကူးဗားမှထွက်ခွာချိန်တွင် Hachioji မတိုင်မီငါပြန်လာမည်မဟုတ်ကြောင်းသိသည်။ ငါကမ္ဘာ့ဖလားသုံးခုတွင်ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပြီးနောက်အင်းဘရွတ်ခ်တွင်ဂျပန်နိုင်ငံသို့မသွားမီနှစ်ပတ်အကြာလေ့ကျင့်ခဲ့သည်။ ငါ့အဘို့, ကပြီးပြည့်စုံသောလေ့ကျင့်ရေးဖြစ်ခဲ့သည်။ ခေါင်းဆောင်ကမ္ဘာ့ဖလားသည်အတော်ကောင်းသွားသည်။ ငါ ၃ တွင်အနက် ၂ ခုတွင်ဗိုလ်လုပွဲပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ကောင်းစွာတက်နေပြီး Hachioji သည်ကျွန်ုပ်အတွက်အနှောက်အယှက်ဖြစ်ခဲ့လျှင် Toulouse သို့ဖိတ်ကြားခံရမည့် Top-2 တွင်လည်းအခိုင်အမာဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျွန်တော့်ရဲ့တိုက်ရိုက်ပြိုင်ဘက်တွေနဲ့အတူလေ့ကျင့်တာကဘယ်လိုမျိုးလဲလို့လူတွေကကျွန်တော့်ကိုမေးကြတယ်။ ကျွန်တော်အဖြေကတောင်တက်ခြင်းသည်အားကစားတစ်ခုဖြစ်သောကြောင့်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အားပိုမိုလေ့ကျင့်ရန်နှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောလေ့ကျင့်ရန်ကျွန်ုပ်အားရိုးသားစွာလှုံ့ဆော်ပေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ လေ့ကျင့်ရေးဆိုတာကလေ့ကျင့်ရေးပဲ။ ပြိုင်ပွဲမှာဘာမဆိုဖြစ်လာနိုင်တယ်။ ကမ္ဘာပေါ်မှာအကောင်းဆုံးလေ့ကျင့်မှုတွေလုပ်ခဲ့တုန်းကကျွန်တော်ဟာအကောင်းဆုံးပြိုင်ဘက်ဖြစ်မှန်းသိတယ်။3မှာလည်းငါလုပ်ခဲ့ရပြီ။
ငါကမ္ဘာ့ချန်ပီယံရှစ်ထွက်ခွာတုန်းကအရာအားလုံးတန်းတူပါဘဲ၊ အမြန်နှုန်း၊ အမြန်စွမ်းအား၊ Bouldering မှာအစွမ်း၊ ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံရှစ်ပုံမှန်အစီအစဉ်သည်စီစဉ်ထားသည့်အတိုင်းအကြမ်းအားဖြင့်သွားသည်။ ငါ Bouldering (Top-20) တွင် semifinals လုပ်ပေမယ့်ဗိုလ်လုပွဲလုပ်ဖို့နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပေ။ ကျနော့်အတွက်တစ်ခုတည်းသောပန်းတိုင်ကတော့အိုလံပစ်အရည်အချင်းကိုရိုက်ကူးဖို့အတွက် Top-20 ကို Combined ပုံစံနဲ့လုပ်ဖို့ပါ။ Lead ၌နောက်ဆုံးဗိုလ်လုပွဲတက်ပြီးနောက်၊ ကျွန်ုပ်သည် Combined အတွက် Top-20 တွင်ရှိခဲ့သည်ကိုသိသည်။ အဆိုပါပေါင်းစပ်နေ့ကလိုက်တယ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါအမျိုးသမီးတွေသူတို့ရဲ့အသက် 20 အရွယ်ယှဉ်ပြိုင်ကြည့်ရှုတစ်နေ့လုံးကုန်လွန်ခြင်းနှင့်နောက်နေ့ငါ့အဘို့ဖြစ်ခဲ့သည်ကိုငါသိ၏။ ဖိုင်နယ်လ်ပွဲစဉ်၌အားကစားသမားရှစ် ဦး ရှိသော်လည်းအိုလံပစ်အတွက်နေရာ ၇ ခုလည်းရှိသည်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဂျပန်နိုင်ငံဟာအိမ်ရှင်နိုင်ငံအဖြစ်သေချာပေါက်သတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်လို့ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံလိဂ်ကနေအားကစားသမားတစ် ဦး ကိုသာခေါ်ယူနိုင်ခဲ့လို့ပါ ဆိုလိုတာကတော့ကျွန်တော်ဟာ Top-7 နဲ့ဂျပန်နှစ်ယောက်သာဗိုလ်လုပွဲကိုရောက်ရင်လူတိုင်းကအိုလံပစ်အတွက်အရည်အချင်းပြည့်မီတယ်ဆိုတာပဲ။
ငါ့အိုလံပစ်အရည်အချင်းပြည့်မှီတဲ့နေ့ကိုအပြည့်အဝအနားယူခဲ့တယ်။ ငါကောင်းသောနံနက်ယံ, ကောင်းမွန်စွာစား, ကောင်းတဲ့ပူနွေးခြင်းနှင့်မြန်နှုန်းအဘို့အဆင်သင့်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်အကောင်းဆုံးအမြန်ဆုံးနံပါတ်ကို Speed ​​Wall တွင် ၆.၉၉၅ စက္ကန့်မတိုင်မီ ၂ ရက်သာကြို။ ထားခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့သည်။ ငါပထမ ဦး ဆုံးပြေးသွားပြီး 6.995x ရတယ်။ မကောင်းဘူး။ ဒါပေမယ့်အချိန်ပဲ။ ဒုတိယအကြိမ်ပြေးလာတာနဲ့အမျှကျွန်မရဲ့ကမ္ဘာဟာပြိုလဲသွားပြီလို့ခံစားမိတယ်။ နောက်ထပ် ၈.၃x နဲ့ ၁၈ နေရာမှာ ၁၈ နေရာရတယ်။ ကျည်တွေအကြားမှာခေါင်းကိုအမြင့်တင်ထားတယ်။ အမြန်နှုန်းက ၃ ခုလုံးရဲ့အဆိုးရွားဆုံးဆုံးမမှုပဲ။ ကျွန်တော့်ရဲ့ Bouldering အတွက်နွေးထွေးမှုကကောင်းပါတယ်၊ ကျွန်တော်အားကောင်းတယ်၊ အမြန်နှုန်းကိုမစဉ်းစားခဲ့ဘူး၊ ယှဉ်ပြိုင်ဖို့အဆင်သင့်ပဲ။ ကျွန်တော်တင်ပြခဲ့တဲ့ကျောက်တုံးလေးခုအနက် ၃ ခုမှာကျွန်တော်ဆုံးရှုံးခဲ့တယ်။ ငါ "ဒါတွေကငါ့ရဲ့စတိုင်မဟုတ်လား" တဲ့။ ငါတကယ်မသိဘူး ကျွန်မရဲ့ဒုတိယကြိုးပမ်းမှုမှာကျောက်တုံးတစ်တုံးကိုထိပ်ဖူးပြီးနောက်ဇုန်တခုကိုလုံခြုံရေးယူခဲ့တယ်။ ငါအသက် 8.3 ပြီးပြီth Bouldering ပတ်ပတ်လည်မှာနောက်ဆုံးသေသွားပြီ။ ဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုနားမလည်နိုင်ဘူး။ ငါအထီးကျန်သို့ပြန်လမ်းလျှောက်သကဲ့သို့ငါခံစားရတယ်။ ငါငြီးငွေ့ဘူး၊ ကျန်းမာနေပေမဲ့တစ်နည်းနည်းနဲ့ငါမျှော်လင့်ထားသည့်အဆင့်အထိမဖျော်ဖြေနိုင်ခဲ့။ ယှဉ်ပြိုင်မှုအဆင့်တွင်ဤသို့သောစွမ်းဆောင်ရည်မျိုးသည်အားကစားသမားများအတွက်အိပ်မက်ဆိုးတစ်ခုဖြစ်သည်။ ခဲသည်ကျွန်ုပ်၏အပြင်းထန်ဆုံးဆုံးမခြင်းဖြစ်သည်ကိုကျွန်ုပ်သိသည်။ ကျွန်ုပ်စိတ်ထဲတွင်ထိပ်တန်း -8 ရမှတ်အလုံအလောက်ရရှိရန်ပထမ (သို့) ဒုတိယနေရာတွင် ၀ င်ခဲ့ရသည်။ ငါလုပ်နိုင်တာသိတယ်၊ နောက် ၂ နာရီလောက်ငါစဉ်းစားမိမှာပဲ။
ကျွန်တော့်ရဲ့ခေါင်းဆောင်နွေးထွေးမှုကအရမ်းကောင်းတယ်။ လမ်းကြောင်းကိုကြည့်ရင်းစိတ်လှုပ်ရှားမိတယ်။ ငါဟာငါ့ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းအတွက်အကြီးမားဆုံးယှဉ်ပြိုင်မှုလမ်းကြောင်းဖြစ်ဖို့အတွက်ကုန်းပတ်မှာချည်ထားသောထိုင်ခုံပေါ်မှာထိုင်ခဲ့တယ်။ ငါထိုင်ပြီးငါ့စိတ်ကိုကျော်ယူကြကုန်အံ့။ ငါနှစ်ပေါင်းမည်မျှယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ရသည်၊ နာရီပေါင်းမည်မျှလေ့ကျင့်သင်ကြားခြင်း၊ မျက်ရည်ကျခြင်း၊ သွေးနှင့်ချွေးထွက်ခြင်းများကိုလွန်ခဲ့သော ၁၉ နှစ်အတွင်းငါသွန်းလောင်းခဲ့သည်ကိုစဉ်းစားမိသည်။ ဤ ခဏ အားလုံးဒီလမ်းကြောင်းကိုရောက်သွားတယ် သမိုင်းကြောင်းအရလူဘယ်နှစ်ယောက်သူတို့နဲ့အိုလံပစ်အားကစားပြိုင်ပွဲကြားမှာရပ်တည်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းရှိတယ်ဆိုတာစဉ်းစားမိတယ်။ ငါလဲကျသွားနိုင်တယ်၊ ငါတတ်နိုင်သလောက်တက်ပြီးအရည်အချင်းပြည့်မှီတယ်။
ငါယုံကြည်မှုနှင့်စိတ်လှုပ်ရှား Lead စင်မြင့်မှထွက်လာ၏။ တတိယအမြန်ဆွဲယူမှုမှာစက္ကန့် ၃၀ မျှသာတက်ပြီးပြီးနောက်ကျွန်ုပ်သည် z-clipped ဖြစ်ကြောင်းသိလိုက်ရသောအခါကျွန်ုပ်နှလုံးကျသွားသည်။ ၎င်းသည်ပြိုင်ဘက်တစ် ဦး ပြုလုပ်နိုင်သည့်အလေ့အကျင့်ကောင်းတစ်ခုနှင့်ပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများဖြစ်နိုင်သည်။ တွန့်ဆုတ်ခြင်းမရှိဘဲ, ငါဆင်းသုံးလှေကားတက်နှင့်ငါ့အမှား fix ။ ကျွန်တော့်ဘဝရဲ့အရေးအကြီးဆုံးလမ်းကြောင်းအပေါ်ကျွန်တော်မယုံနိုင်ဘူး၊ အဲဒီအမှားကိုကျွန်တော်ကျူးလွန်မိခဲ့တယ်။ အမှားကနေလွတ်မြောက်ဖို့ကျွန်တော်ကြိုးစားပြီးမြန်မြန်တက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ ငါလှုံ့ဆော်မှုများအကြားတှနျ့ဆုတျခဲ့ပါဘူး။ ကျွန်ုပ်၏ပင်ကိုယ်အသိအပေါ်မူတည်သည်။ ငါစာအုပ်တစ်အုပ်ထဲရှိစွန့်စားမှုတစ်ခုစီသို့ (သို့) နှစ်ခုသို့ရောက်ရန်ကျွန်ုပ်၏စွန့်စားမှုအားလုံးကိုယူရမည်ဟုကျွန်ုပ်သိသည်။ ငါနောက်ဆုံး headwall ပေါ်သို့ဆွဲထုတ်ခြင်းနှင့်ခက်ခဲရွေ့လျားမှုမှီဝဲခြင်းနှင့်လူအစုအဝေးထံမှရွှင်လန်းငါ့နား၌ဟောက်; ငါ ဦး ဆောင်အနီးကပ်ခဲ့ကြောင်းသိသည်။ ငါလမ်းကြောင်းအပေါ်နှစ်ခုမှသုံးခုပိုမိုရွေ့လျားပိုမိုတိုက်ခဲ့, ပြီးတော့ကျဆင်းခဲ့သည်။
ငါမြေပြင်သို့ဆင်းသောအခါငါအမြဲတမ်းပြုသကဲ့သို့ငါမျှော်ကြည့်ပေမယ့်တစ်ခုခုမှားယွင်းနေ, ငါပြုမိခဲ့အမြန်သရေကျဒုတိယဒုတိယ unclipped ခဲ့သည်။ ငါဆင်းအမှတ်သွင်းယူလိမ့်မည်။ ငါအဝတ်မချွတ်ဘဲထိုနေ့တွင်အိုလံပစ်အရည်အချင်းပြည့်မှီလိမ့်မည်မဟုတ်ကြောင်းကျွန်ုပ်သိသည်။ ကျွန်တော့်အသင်းဖော်တစ် ဦး ထံမှဗီဒီယိုပြန်လည်သုံးသပ်ချက်ကိုကျွန်တော်သွားခဲ့သည်၊ ကျွန်တော်ကဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတစ်ခုကိုမည်မျှဗြောင်ကျကျလွတ်သွားသည်ကိုသိသည်။ ငါထွက် ၁၀၀% ဖြတ်လိုက်တယ်။ ကြိုးထဲ၌လွတ်လပ်စွာစီးဆင်းနေသောကြိုးကိုကျွန်ုပ်တွေ့မြင်နိုင်သည်။ ငါပြုတ်ကျသောအခါအမြန်ဆွဲချသည်နံရံကိုကပ်ထားကာ ၁ ဘီလျံအခွင့်အလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါဟာငါ့အတွက်သတင်းကောင်းဖြစ်တယ်။ ငါစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုမချိုးဖောက်ဘူးငါ့တန်ဖိုးအပြည့်အဝတန်ဖိုးကိုရလိမ့်မယ်။ ငါနေဆဲအရည်အချင်းပြည့်မှီနိုင်! ငါဒုတိယအနေအထား၌ရှိ၏, ဒါပေမယ့်သူကတက်ကိုင်မလဲ
ကျွန်တော့်နောက်မှာ Jakob Schubert ဖြစ်ပြီးသူဟာယုံကြည်မှုရှိပြီးခိုင်မာမှုရှိတယ်။ သူကငါ့ကိုအနည်းငယ်ရွေ့လျားခြင်းဖြင့်လွန်ခြင်းနှင့်ငါ့ကိုတတိယနေရာသို့တွန်းအားပေး။ ငါ 10 မှာဖြစ်ခဲ့သည်th ကျွန်တော့်ရှေ့မှာဂျပန်တောင်တက်သမားလေးယောက်ရှိနေတဲ့အတွက်ချည်ကြိုးနဲ့ချိတ်ထားတယ်။ နောက်ဆုံးပြိုင်ဘက်အာဒံ Ondra ဖြစ်ခဲ့သည်။ သူကကျွန်တော့်ကိုလမ်းခရီးမှာရှောက်သွားခဲ့တယ်၊ ပြီးပြီဆိုတာငါသိတယ်၊ ငါ့ရဲ့နှလုံးနစ်မြုပ်သွားတယ်၊ ငါဒီနေ့အရည်အချင်းပြည့်မီမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်လက်ခံလိုက်တယ်။ ငါရမှတ်များလန်းဆန်းနှင့်ငါ့အဆင့် 12 အထိနိမ့်ကိုမြင်တော်မူ၏th။ ငါဝမ်းနည်းပေမယ့်ငါခဲလမ်းကြောင်းအပေါ်ဖျော်ဖြေပျော်ရွှင်ခဲ့ပါတယ်။ လာမယ့်သုံးလဘယ်လိုဖြစ်မယ်ဆိုတာငါစဉ်းစားမိတယ်။ ပြီးတော့ Toulouse ဘယ်လိုခံစားရမယ်ဆိုတာငါစဉ်းစားခဲ့တယ်။ ကျွန်ုပ်၏အိုလံပစ်အိပ်မက်တွေအကောင်အထည်ပေါ်လာဖို့အတွက် Toulouse ကိုပြန်ပြီးယှဉ်ပြိုင်ဖို့လိုတယ်။ ဒီအဘယ်သူအားမျှသေးဖြစ်ခဲ့သည်။
မိနစ်အနည်းငယ်အကြာမှာတော့ငါပခုံးပေါ်ထိပုတ်ပါတယ် Jongwon Chong ပြုံးနေသည်, ငါ့ကိုပွေ့ဖက်နေစဉ် "ဂုဏ်ယူပါတယ်, buddy" ဟုပြောသည် ငါစိတ်ရှုပ်ထွေးသွားတယ်၊ ငါကောင်းကောင်းတက်ခဲ့တယ်လို့ပြောပေမယ့်မလုံလောက်ဘူး သူကငါ့ကို 10 မှာငါ့ကိုခဲ့သည့်သူ၏ဖုန်းကိုပြသခဲ့သည်th နေရာ။ ဒါပေမယ့်ဘယ်လို? နောက်မိနစ် ၂၀ သည်အလွန်ထူးဆန်း။ အဆင်မပြေပါ။ (ကနေဒါမှမဟုတ်) တစ်စုံတစ် ဦး သည်အာဒံအိုဒရာကိုအယူခံဝင်ခဲ့သည်။ စွပ်စွဲချက်အရသူဟာလမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုတက်နေချိန်မှာသူကခြေထောက်ပေါ်တက်ခဲ့ပြီးသူကခွင့်ပြုမထားဘူး။ သူ့ရဲ့အနိမ့်ရမှတ်နဲ့အတူကျွန်တော့်ကို Top-20 ထဲပြန်ထည့်လိုက်တယ်။ ကျွန်တော့်စိတ်ထဲမှာအာဒံကဒီမူလီကိုခြေလှမ်းလှမ်းဖို့ရည်မှန်းထားတယ်ဆိုတာကျွန်တော့်စိတ်ထဲမှာမရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့်အားကစားသမားတွေကလမ်းကြောင်းပေါ်တက်ဖို့သူတို့ကိုသော့ခလောက်မသုံးနိုင်ဘူး၊ ကျွန်တော့်အမြင်မှာဒီစည်းမျဉ်းကစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေမှာတော်တော်လေးကြီးမားတဲ့အားနည်းချက်ရှိနေသေးတယ်။ ။ သို့သော်နောက်ဆုံးတွင်တရားသူကြီးများသည်အနိမ့်ဆုံးရမှတ်အပေါ်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ အခုတော့ငါ့နာမကိုမြင်လျှင် Top-10 စာရင်းငါအိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မီတယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်လာတယ်။ သို့တိုင်ကျွန်ုပ်မည်သို့ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်ကိုမကျေနပ်မိပါ။ ငါ Czech အဘိဓါန်နည်းပြကိုမြင်, သူတို့အဘို့ငါခံစားခဲ့ရသည်။ ဘယ်သူကဘယ်သူ့ကိုအရည်အချင်းပြည့်မှီမလဲဆိုတာသေချာတဲ့အလောင်းအစားတစ်ခုရှိခဲ့ရင်အာဒံကိုခန့်မှန်းလိမ့်မယ်။
ကျွန်တော့်အသင်းဖော်တွေကကျွန်တော့်ကိုဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားစွာနဲ့ပီတိဖြစ်မိတယ်။ ဘယ်လိုဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါစေငါအိုလံပစ်အစက်အပြောက်လုံခြုံရန်လုံလောက်စွာကောင်းစွာတက်ခဲ့ကြောင်း, ငါအိုလံပစ်သွားခဲ့သည်။ ကျွန်တော်ငိုခဲ့သည်။ ငါလူတိုင်းကိုပွေ့ဖက် ငါဓာတ်ပုံအချို့ရတယ်။ တစ်နေ့လုံးထူးဆန်းနေတယ်။ ၁၀၀% အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလို့ခံစားမိပေမယ့် Speed ​​(သို့) Boulder လိုချင်တာကိုမလုပ်ဆောင်ခဲ့ဘူး။ ငါမိုMary်းသီးမာရိကိုလမ်းခရီးတွင်ပစ်ချလိုက်သည်၊ ၎င်းသည်အနိုင်ယူပြီးနည်းနည်းလေးမှနည်းနည်းသာပေးဆပ်ခဲ့သည်။ နောက်နှစ်ရက်အကြာမှာယှဉ်ပြိုင်ရ ဦး မယ့်၊ ဒါကြောင့်တရားဝင်အခမ်းအနားကျင်းပဖို့အချိန်မရှိသေးဘူး။ ငါအိပ်ရာဝင်ပြီးနေ့ကိုစဉ်းစားရင်းအတွေးတွေကိုကွဲပြားတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ခဲ့တယ်။ နောက်တစ်နေ့မနက်မှာနိုးလာပြီးဘယ်နေ့လဲလို့တွေးမိတယ်။ ငါအိပ်မက်မက်ခဲ့ရင်ဒါမှမဟုတ်အိုလံပစ်အတွက်ငါတကယ်အရည်အချင်းရှိခဲ့ရင် ယင်းသည်ခိုင်မြဲစွာနစ်မြုပ်ရန်အတွက်ရက်အနည်းငယ်ကြာခဲ့သော်လည်းအမှန်မှာကျွန်ုပ်သည်တိုကျို ၂၀၂၀ အိုလံပစ်အားကစားပြိုင်ပွဲသို့ကျွန်ုပ်သွားစဉ်ဖြစ်သည်။